Sekuqinisekisiwe: UDladla useyishiyile iChiefs | News24
Sekuqinisekisiwe: UDladla useyishiyile iChiefs
Johannesburg – UJosta Dladla usekuqinisekisile ukuthi uyashiya kwiKaizer Chiefs ngemuva kokuhluleka ukufinyelela esivumelwaneni senkontileka entsha naleli qembu njengoba esazimisele nokuqhubeka nokudlala ibhola.
Lo mdlali oneminyaka engu-35 ubudala usechithe iminyaka eyisithupha nengxeny eNaturena kanti manje usekhulekile ukuthi angasayina nanoma yiliphi iqembu elimfunayo njengoba engasenayo inkontileka naMakhosi.
Ngokubika kweKickOff kwisitatimende esikhishwe yilo mdlali uthe:
OLUNYE UDABA: Kulindeleke ukuthi iChiefs icacise ngekusasa labadlali
“Ngiqine ngokwenele futhi bengizilolonga ngokweqile ngizizwa ngisakulungele ukudlala ngidlulisele isipiliyoni sami kwabanye abadlali abasebancane.
Izinyawo zami zisakulungele ukugijima.
Ngichithe iminyaka eminingi kwiChiefs kanti ngizizwa ngihloniphekile ngokudlalela leli qembu elikhulu futhi elihlonishwayo eNingizimu Afrika.”
“Ngibonga uSihlalo weqembu nabalandeli ngokungeseka anginike khona kule minyaka eyedlule kanti manje sekuyisikhathi sokuthi ngiqhubekele phambili.”